Akụkọ - GYN WH KA IJI Jiri GALVANIZED MGBE ỌZỌ AKW WKWỌ AKWELKWỌ?
Na-achọ ịgbanye waya izizi kpara akpa?
You maara na ị nwere nhọrọ?
E nwere ụdị abụọ nke galvanized welded waya fencing ihe: GBW (kpaliri tupu ịkpa ákwà / ịgbado ọkụ) na GAW (kpaliri Mgbe ịkpa ákwà / ịgbado ọkụ). Anya ha pụtara yiri nnọọ. Mana ilerukwu anya, ị ga-ahụ ihe dị iche. Ma mgbe etinyere ha, ọdịiche ahụ na-adịwanye ịrịba ama karịa ka oge na-aga. Kedu nke bara uru, dị ogologo karịa, dị njikere karịa?
GBW kpaliri Tupu ịgbado ọkụ GAW kpaliri Tupu ịgbado ọkụ
Weld point-zinc gbara ọkụ
emere site na eriri waya waya
Ọkụ - enweghị nchebe site na nchara na corrosion
Mmiri na ihe ọ bụla na-emebi emebi na nkwụsị - Jiri nwayọ na-eri nchara A na-adọta ngwaahịa niile emechara site na bat nke zinc a wụrụ awụ
Ejiri zinc mechie njikọ nke waya
Echebe site na ikpughe na isi mmalite nke corrosion na nchara
Dị na gauges na ntupu nha
Chicken waya ntupu / hexagonal Waya ntupu
GBW kpaliri Tupu akpa Ọkpa GAW KWALARA Tupu Wekpa ákwà
Akụ na ụba ma dị ọnụ ala ma e jiri ya tụnyere GAW
ogologo ndụ ogologo ndụ
dị na njupụta dịgasị iche iche na njikọta A na-adọta ngwaahịa niile emechara site na bat nke zinc a wụrụ awụ
Nnu mmiri na griin haus oche na-eji
Dị elu karịa GBW otu
Ihe eji eme ka GAW di elu karie GBW. Ha ga-anọkwa ogologo oge karịa GBW. Nke a bụ ihe kpatara ha ji bụrụ nhọrọ zuru oke ị ga-atụle mgbe ịchọrọ ka eriri waya welded. Investmentkwụ ụgwọ ego izizi gị dị elu. Mana nke ahụ karịrị nsogbu site na ogologo ndụ nke waya. Ọbụghị naanị na ị ga-enweta ọtụtụ afọ site na ngere gị. Ma na ị ga-azọpụta na mmefu nke rụkwaa na nnọchi. Gini mere ị ga-eji gabigara nkụda mmụọ na nsogbu ahụ?
GAW meshes bụ nhọrọ kachasị mma maka ngị anụmanụ. Okpo galvanizing ga-ebili na nsị site na nsị na mmamịrị. Mkpa ọ dị iji dochie oghere ga-ebelata nke ukwuu. Ọnụ ego dị elu nke ngwaahịa dị elu ga-azọpụta gị ego.
Na mkpokọta, ngwaahịa GAW siri ike ịchọta. E nwere ụlọ ọrụ ole na ole na-ere ha, nke kpatara n'ihi nnukwu ego ha. Ma ina a elu àgwà welded / ịkpa ákwà waya fencing ihe adịghị ike. Nke ahụ bụ n'ihi na ọtụtụ ndị amaghị banyere Galvanized After Weld / Weave nakwa na enwere nnukwu ọdịiche.
Mgbe ndị mmadụ na-ekwu na waya ahụ nwere ike imepe, ha na-echekarị maka ngwaahịa GBW ọnyà. GAW adịghị agbata n'uche, ọ bụ ezie na ha nwere ike ịhọrọ ịzụta ngwaahịa dị elu. Echere na enwere ebe ọ bụ na waya ahụ nwere galvanized, ọ ga-adịgide ruo ọtụtụ afọ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ha maara naanị, ha nwere ike ịzụta ihe ka mma nke ga-eju afọ ahụ ogologo oge.